Imisila enomtsalane: Umdlalo weOtome – Ukukopa&Ukuqhawula – Iingcebiso ze-Android cheats
By Editor | EyoMqungu 17, 2022
■ Isishwankathelo ■
Xa umama wakho egula ngequbuliso sisifo esinganyangekiyo, sele ulahlekelwe lithemba xa ukhumbula intsomi yendawo yeekati-indawo apho iminqweno yenzeke khona ...
Usuku lunye, emva kokutyelela umama wakho esibhedlele, ekugqibeleni ulandela ikati yecalico engaqhelekanga ukuya kwindawo ekufutshane, kodwa xa ungena ngesango le torii, uzifumana sele ukhutshelwe ngaphandle kwindawo yeekati. Ukukhumbula intsomi yendawo, nifuna uKumkani weekati kodwa nifumane igqwirha endaweni yalo. Uthembisa ukunyanga umama wakho ngexabiso-kufuneka uncame ubomi bakho bomntu kwaye uhlale kwindawo yeekati ngonaphakade..
Ujongene nokhetho olungenakwenzeka, sele uza kunikezela kukuphelelwa lithemba xa ugaywa ngumbutho wabavukeli wamadoda eekati ezintle abizwa ngokuba ziiThe Strays.. Ngaba uya kunyanzelwa ukuba ulahle ubuntu bakho, okanye unokuthatha phantsi igqwirha ngexesha ukusindisa umama wakho-kwaye ufumane uthando endleleni?
Gxila iinzipho zakho kwibali lothando kunye ne-whimsy kwi-Charming Tails!
■ Abalinganiswa ■
Kumkani – Ikati ephezulu
Ulumkile kwaye unenkani, URei yinkokeli ye-Stys kwaye uzimisele ukuziphindezela kwigqwirha kwaye asindise amaxhoba alo ..., kulula ukuthetha kunokukwenza. Ngaba uya kumnceda ukuba oyise ukwenzakala kwakhe kwaye akhulule ummandla wekati kube kanye?
Tatsuki- Intlola ekhohlakeleyo
Kanye umntu, le kati ipholileyo isebenza njenge-arhente ephindwe kabini, ukugada ibhotwe ngelixa esondla ulwazi kwi-Strays. Ubonakala ezimisele ukukukhusela kwaye eqinisekisa ukuba umnqweno wakho uyafezekiswa, nto leyo ekwenza uzibuze ukuba uyazi ngakumbi ngosapho lwakho kunokuba avumele...
Ngaba unokufunda inyaniso ebangela ukuba akulungele ukukunceda nesizathu sokuba anqwenele ubuntu bakhe?
Kuko oko- Ikati Yendlu Edlalayo
Le kitty imnandi yikati yosapho lwakho, kuphela ngoku eyindoda-kwaye umhle ngelo xesha! UTama unentliziyo yegolide kwaye angakwenzela nantoni na, kodwa xa ebuzwa ukuba kutheni engekho ekhaya ixesha elide kangaka, uyawuphepha umbuzo.
Xa ikati iphumile ebhegini, iqhina lakho liya komelela, okanye iya kuwa?
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Charming, Ukukopa, umdlalo, Otome, Tails
← Jikelezisa Upelo – Ukukopa&Ukuqhawula Poppy Huggy Wuggy Hide ‘N Seek Cheats&Ukuqhawula →